वुहानबाट ल्याइएका नेपाली खरिपाटीमा, समस्या देखिए टेकु वा पाटन लगिने !
वुहानबाट ल्याइएका नेपाली खरिपाटीमा, समस्या देखिए टेकु वा पाटन लगिने !
काठमाडाैं - चीनको वुहानबाट उद्दार गरेर ल्याइएका १७५ नेपालीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा आवश्यक स्वास्थ्य जाँचपछि खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा लगिएको छ। क्वारेन्टाइनमा उनीहरुलाई बस्न विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नै उनीहरूलाइ राखिने जनाएकाे छ।
- आवस्यकताअनुसार मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा अन्य मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था गरिएको छ। आफूलाई त्यस्तो कुनै समस्या भएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मचारीलाई खबर गर्नुपर्छ।
- क्वारेन्टाईनमा रहँदा अभिभावकसँग प्रत्यक्षरुपमा भेटघाट गर्न पाइने छैन।